Top 25 Online Ringtone eso Mee Ringtones maka ekwentị gị
4 Banye Spotify a
Ọtụtụ ndị taa, ọbụna obere ụmụaka na ndị agadi ndị mmadụ, nwere onwe ha mobile igwe. Ya isi nzube ya bụ iji nwere ihe dị mfe na-adaba adaba ụzọ nkwurịta okwu na ndị ndị na-na a anya. Ma nke a bụkwa oké ụzọ ntụrụndụ maka ọtụtụ; anyị nwere ike igwu egwuregwu, nche videos, na ndị ọzọ.
Na otu onye nke kasị mma atụmatụ mobile ntị ike na-enye bụ ya ike na-egwu music, anyị nwere ike igwu niile anyị mmasị songs na ya mgbe ọ bụla anyị chọrọ, ma ọ bụghị naanị nke ahụ, anyị nwere ike ugbu a na-emekwa ka anyị mmasị song dị ka anyị ringtone mgbe onye kpọrọ anyị ka anyị . Ma, nsogbu bụ, ọ bụghị na ekwentị mkpanaaka nwe maara banyere ma ọ bụ otú ime nke a. Na-enyere gị aka na nke a, anyị na-eme a ndepụta nke 25 online ringtone eso ebe ị pụrụ ime ka ọkacha mmasị gị song dị ka ekwentị mkpanaaka gị ringtone.
1. Mee Your Own Ringtone
Mee ka gị na Own Ringtone bụ ihe dị mfe saịtị na-ahapụ gị akuku na tọghata gị music faịlụ ka mfe setịpụrụ dị ka ekwentị mkpanaaka gị ringtone. Ị nwere ike tọghata gị song n'ime AAC, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, ma ọ bụ WMA. Site na saịtị a ị nwekwara ike họrọ na ịtọ ụda nzacha ọ bụrụ na ị biko.
Na-enye ntụziaka doro anya
Website pụrụ sụgharịa asụsụ dị iche iche; Dutch, Spanish, Russian, Portuguese, na French
Awade ahịa nkwado
Na-enye tupu customization zuru ezu nkọwa
Ọ dịghị download nhọrọ maka iPhone ọrụ
A bụ ihe ọzọ ebe ị nwere ike ime ka ọkacha mmasị gị song ma ọ bụ ihe ọ bụla song ị chọrọ ka gị ringtone for free. Ị nwere ike ime ka gị na ringtone site na-ebugote gị song si desktọọpụ ma ọ bụ etinye na song njikọ si YouTube. Site na saịtị a ị nwere ike ịzọpụta gị ringtone dị ka AAC, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, ma ọ bụ WMA.
Nwere ike edited na Easy, Advanced, na ọkachamara mode
3. Free Ringtone Onye kere
Mob.org bụ ebe ọzọ ebe ị pụrụ atụgharị ọ bụla mp3 ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọdịyo faịlụ n'ime ringtone. Ikekwe ị nwere mmasị song na ị chọrọ ịnụ dị ka gị ringtone? Ị pụrụ ime ka o kwe omume ebe a. Nke a website nye mfe interface na mfe iso nzọụkwụ ike gị nnọọ onwe ringtone maka ekwentị gị.
Saịtị na-awade ndị ọzọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka mobile na akwụkwọ ahụ aja, gburugburu, egwuregwu, na ndị ọzọ na ngwa ọdịnala n'ihi free
Ị nwere ike ịhọrọ ekwentị nlereanya ị kpọmkwem iji
Na-enye dị mfe mfe ịgbaso ntụziaka
Adịghị akwado YouTube njikọ
4. Online MP3 Ringtone Onye kere
Ebe i nwere ike ime ka gị onwe MP3 ụdaolu na ha na onye ọrụ-enyi na enyi ringtone onye free. Tọghata ọ bụla song-amasị gị n'ime ụdaolu na nyefee gị na ekwentị mkpanaaka iji.
Nye ndị ọzọ ọrụ ndị dị ka akwụkwọ ahụ aja, gburugburu, na ngwa
Ndebanye aha chọrọ
Na-achọ Adobe flash ọkpụkpọ plugin
Ebe i nwere ike dị mfe bulite gị music si na desktọpụ gị ma ọ bụ YouTube, họrọ akụkụ nke abụ na ị chọrọ ka dị ka gị ringtone, mgbe ahụ, zọpụta na ibudata ya na gị android ekwentị ma ọ bụ iPhone.
Nwere nhọrọ ibudata dị ka iPhone faịlụ
Awade top ụdaolu ị nwekwara ike ibudata for free
Na-enye kọntaktị nkwado
Na-achọ ka i mee otu akaụntụ
Na CellMind ị pụrụ ime ka ringtone maka ekwentị gị na-enweghị mkpa na-eme ka ọ bụla registration na ha atọ mfe iso nzọụkwụ.
Ọ dịghị registration mkpa
Mfe iso ndu
Ike ibudata readymade ụdaolu kere site ndị ọrụ ndị ọzọ
Awade nkwado ọrụ
7. The Unlocker
Nke a website pụrụ inyere gị aka ka gị onwe gị na-eme pụrụ iche ụdaolu maka free iji ole na ole mfe nzọụkwụ, ọ dịghị download ma ọ bụ nwụnye mkpa!
Nnọọ mfe interface
Mfe ịgbaso ntụziaka
Awade ndị ọzọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka mobile na akwụkwọ ahụ aja, gburugburu, egwuregwu, na ndị ọzọ na ngwa ọdịnala n'ihi free
Na Free Ringtones, ị nwere ike ime ka gị na nnọọ onwe ringtone site na ekwentị gị nke ọ bụla song-amasị gị. Ị nwere ike atụgharị ọdịyo faịlụ site na desktọpụ gị ịdị gị ringtone ma ọ bụ i nwere ike chọọ ọ bụla video si YouTube na-eme ka olu-ya gị ringtone.
Na-enye onye ọrụ nkwado
Jụrụ ikike ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị ringtone n'ihu ọha ma ọ bụ
Nye nhọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata maka Android ma ọ bụ iPhone
*** Ọ dịghị anya cons
Cut MP3 bụ ihe dị mfe iji online ọrụ na-enye gị ohere ubi a akụkụ nke ihe MP3 faịlụ na-enweghị mkpa decrypt na MP3. Nke a bụkwa oké ọrụ na-eme ka gị onwe gị na ringtone maka free!
Naanị na-enye ohere mp3 faịlụ
Nke a bụ oké website na-enye gị iji tọghata ọ bụla ọdịyo faịlụ site na kọmputa gị na-atụgharị n'ime ringtone. I nwekwara ike ịchọ ọ bụla video si YouTube kpọmkwem site na saịtị na tọghata ya.
Na-enye nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka
Ike ịchọ video YouTube kpọmkwem site website ma kpọọ ya maka preview
-Enye gị ohere ịchọgharịa ma budata ụdaolu mere site ndị ọrụ ndị ọzọ
Kwesịrị abanye na ibudata ringtone
Mad Ringtones bụ a website na-enye gị iji tọghata videos 'audio si YouTube ka Ringtone na ibudata ya ogologo ekwentị gị. Ha na-ka ị na-eji ihe ọ bụla audio faịlụ site na desktọpụ gị na kọmputa.
Na-enye ohere ibudata readymade ụdaolu kere site ndị ọrụ ndị ọzọ
Enye gị ohere iji chọọ ụdaolu site na saịtị
Na-enye onye ọrụ na-akwado
Mgbagwoju anya interface
Ebe i nwere ike ibudata dị iche iche ụdaolu ndị kasị ewu ewu songs taa. I nwekwara ike ime ka gị onwe ringtone ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
Enye gị ohere download dị iche iche n'elu ụdaolu
Enye gị ohere iji chọọ ụdaolu
Interface bụ mgbagwoju anya
-Achọ ka ị banye n'ihu na-eji ọrụ
Ọ bụrụ na ị na-achọ a website na-enye gị ka free ụdaolu online, Melofania bụ ihe ọzọ na website ị kwesịrị ị na lelee. Nanị bulite ọ bụla ọdịyo faịlụ na ị chọrọ ha na sava na-eji anyị na-na saịtị n'elu ikpo okwu dọwara gị ringtone ozugbo gị ụda faịlụ.
Na-enye ndị ọhụrụ music na celebrity ozi ọma
Awade ọrụ ka ọtụtụ ekwentị ụdị dị ka Nokia, Apple, blackberry, HTC, LG, Samsung, na ndị ọzọ
Atụmatụ ndị kasị ewu ewu ụdaolu njikere download
Adịghị enye ahịa nkwado
Ringtonizer bụ ihe ọzọ na web-dabeere ringtone onye na ike ga-eji site onye ọ bụla chọrọ ime ka ha onwe ha ringtone. Ha na-enye gị na ndị kasị ewu ewu songs na-ghọọ ringtone maka download.
Na-enye kasị ewu ewu na music njikere maka download
Na-enye ntụziaka doro anya nke ọ bụla edinam ị na-eme n'ime saịtị
Ulo oru na 2005, Myxer bụ otu n'ime ndị mbụ weebụsaịtị iji nye ọrụ na-ebugote gị kasị mmasị songs ghọọ ekwentị ụdaolu. Ha nwere ịtụnanya interface na mfe ịnyagharịa website.
Easy ịnyagharịa website
Enye gị ohere iji chọọ ọ bụla songs ma ọ bụ ụdaolu site na saịtị
-Enye gị ohere ige Radio
Zamzar bụ ihe ọzọ na website lekwasịrị anya na-eme ụdaolu maka gị. Ha na-enye ihe ọmụma zuru ezu banyere converting gị audio faịlụ dị ka ringtone. Ha na-enyekwa FAQ na peeji nke na ga-aza ajụjụ gị.
Na-enye nke ọma ọmụma banyere omume ị ga-eme n'ime saịtị
Na-enye ha onwe ha nchọgharị nkwado
Awade dịgasị iche iche nke faịlụ converting nhọrọ
17. Online Audio cutter
Online Audio cutter bụ a website na-eje ozi dị a ringtone onye na saịtị, audio joiner, ọdịyo Ntụgharị, video cutter, video Ntụgharị, na olu na video-edekọ ihe.
Na-enye ndị ọzọ ọrụ ndị wezụga ịbụ onye audio cutter
Na-enye onye ọrụ nkwado ọrụ
Enye mfe ịgbaso ntụziaka
Nwere ike ina bulite faịlụ eduzi si Google Drive, Dropbox, na YouTube
18. jidere tube
Ebe i nwere ike tọghata gị audio faịlụ n'ime ringtone. I nwekwara ike tọghata music n'ime dị iche iche faịlụ Ọkpụkpọ mfe na ngwa ngwa.
Ntụziaka dị mfe na-eso
Nye dị iche iche faịlụ Ọkpụkpọ
Z Ringtone dị nnọọ mfe saịtị na-eme ya ọrụ na-enwogha ọdịyo faịlụ n'ime ringtone na ị nwere ike na-ezitere gị na ekwentị.
Ọ nwere ike na-eziga faịlụ gị ekwentị
Weebụsaịtị dị mfe ịnyagharịa
Nye email nkwado
Na-enye ringtone ọbá akwụkwọ kpọmkwem download nke zọpụta faịlụ
Interface bụ nnọọ mfe
Cutting bụ ntuziaka
20. My Obere ekwentị
Na My Obere ekwentị ị na-enwe ike iji ihe ọ bụla MP3 ọdịyo faịlụ ma mee ka ọ dị ka ekwentị gị ringtone. Ị nwere ike idezi bụla nke na ọdịyo na ibudata ya na gị na cellphone for free.
Awade dị iche iche ọrụ
Egbu osisi na chọrọ iji eji ọrụ
21. Audio cutter
Ebe i nwere ike bee ọ bụla ọdịyo na ị chọrọ na-atụgharị ya n'ime ekwentị gị ọhụrụ ringtone. Ọ dị mfe iji na ha na-enye dị iche iche ụdị nke bara uru ọrụ.
Na-enye ndị ọzọ ọrụ ndị wezụga ringtone Ndinam
Website pụrụ sụgharịrị gaa n'asụsụ ndị ọzọ
22. Akụ Anyị Na
Na-akụ Anyị na ị nwere ike ịmepụta na ibudata gị onwe gị ringtone si ọkacha mmasị gị songs. Nke a website enye gị ohere download njikere ringtone maka ekwentị gị.
Na-enye Kacha ọhụrụ ụdaolu maka download
Ike ịchọ song ị na-achọ aka
Ogbenye website interface
Switchr bụ ọhụrụ website na awade na-atụgharị ọ bụla ọdịyo na ị chọrọ ka gị ọhụrụ ekwentị ringtone. Ha na-enye nkecha na mfe interface ga-eme ka gị ringtone eme ahụmahụ mfe.
Iji aka ịhọrọ ihe usoro ị chọrọ iji tọghata gị faịlụ ka
Ebe ọ bụ na ọ bụ ọhụrụ, ọ bụghị ihe niile na njikọ na-ma dị
Na-achọ gị adreesị email gị ibudata faịlụ
Na Tonecator ị nwere ike mfe ka gị onwe gị pone ringtone site n'ịtụgharị ọ bụla songs ma ọ bụ ọdịyo faịlụ ka a faịlụ na bụ dakọtara na mkpanaka gị na ngwaọrụ.
Nnọọ ntụziaka doro anya
Na-enye dị iche iche na usoro nke na-ebugote gị faịlụ
Mgbanaka Buzz bụ ihe ọzọ mfe iji ringtone onye na-adịghị na-achọ ihe ọ bụla ma ọ bụ download registration iji. Ọ na-enye mfe ma dị mfe ịgbaso ntụziaka na i nwere ike iji tọghata music n'ime nkeji ole na ole.
Dị mfe iji
Pụrụ ịkwado MP3, .mp4, .AAC, .WMA, .M4A faịlụ formats
Files nwere ike ibudata na ekwentị mkpanaaka site na ịga na ha mobile saịtị
Adịghị enye ihe ọ bụla ọzọ ọmụma banyere saịtị
Ya mere na ọ bụ ya! Ndị a bụ n'elu 25 free ringtone onye saịtị online na i nwere ike iji na-atụgharị ọkacha mmasị gị music dị ka ekwentị mkpanaaka gị ringtone!
Olee otú Iji Mee Your Own Ringtone
iPhone Ringtone Ntụgharị: tọghata Video ka iPhone Ringtone (iPhone 5 gụnyere)
Common Green ihuenyo Mejọọ na Olee izere ha
Olee otú mpikota onu AVI Files na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Top 10 Atụmatụ gị mkpa maara banyere webcam edekọ
Olee otú iji VLC na-egwu Blu-Ray fim?
Olee otú Mepụta Akụkụ site Akụkụ 3D Video
Top 10 Lego Movie DVD maka Kids
Na-ewu ewu Online & gụgharia Video Sites
Olee otú ịhọrọ Right Video Ntụgharị
Olee otú akwụsịlata A Song-enweghị Agbanwe Agbanwe Ẹtop
> Resource> Video> Top 25 Online Ringtone eso Mee Ringtones maka ekwentị gị